Voaro amin'ny andron'ny fakam-panahy
“Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany” Apôk. 3:10
Mbola mitohy foana ny ady eo amin’ny herin’ny ratsy sy ny tsara, eo amin’ny anjelin’Andriamanitra sy ireo anjely lavo. Maro ny fandrika eo aloha sy aoriantsika, eo amin’ny havanana sy havia ihany koa. Ny fifanandrinana izay atrehintsika amin’izao no ho farany eto an-tany. Eo anivon’izany isika izao, andaniny roa no miezaka mafy hahazo ny fifehezana. Tsy afaka ny ho eo afovoany mihitsy isika eo amin’izany fifanandrinana izany, tsy maintsy misafidy ny andaniny iray na ny iray hafa isika. Raha miandany amin’i Kristy isika, raha manaiky Azy eo imason’izao tontolo izao amin’ny asa sy ny teny, dia manao fanambarana velona momba Ilay nofidintsika hotompoina sy omem-boninahitra. Eo amin’io fotoana manan-danja amin’ny tantaran’ny tany io dia tsy tokony hametraka fisalasalana mikasika izay hiandaniantsika isika.
“Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany”. Io soratra masina io no maneho an-tsary ny andro fakam-panahy izay hisedrana ireo izay monina eto an-tany. Miaina izany isika izao, tsy misy mihitsy fomba azo ialana amin’izany fifanandrinana izany. Raha misy eo amin’ny fiainanao kileman-toetra izay tsy ezahinao resena, dia azo antoka fa hanao izay tratry ny heriny ny fahavalo hanararaotra izany, satria mijery amim-pahamalinana fatratra izy ka mitady izay hanimbana ny finoan’ny tsirairay.
Mba handresena ny sakana rehetra ataon’ny fahavalo dia mila mifikitra amin’ny hery ivelany sy izay ankoatra ny antsika isika. Mila mihazona fifandraisana velona sy tsy miovaova amin’i Kristy isika, Izy ilay manana hery afaka manome fandresena ho an’ny fanahy izay manana finoana sy fanetren-tena. Raha mahavita tena isika, ary mihevitra fa afaka mandeha araka izay tiantsika, nefa manantena ny hiandany amin’ny marina amin’ny farany, dia ho hitantsika fa nanao fahadisoana mahatsiravina isika. Satria manantena ny handray ny valisoa ho an’izay maharesy, dia tsy maintsy mirohotra ho amin’ny tolona ataon’ny kristianina isika, na dia misetra fanoherana aza isaky ny mandroso.